Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements/ig - Meta
Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements/ig
Nhọrọ nke ndị nlekọta na-eso usọrọ ọrụ nhazi kọmịtịị nke Wikimedia Foundation.Ndị nlekọta na-arụ ọrụ n'ụzọ ezi uche dị na ya, na-arụsi ọrụ ike, ma na-echekwa echiche, na nlekọta nke ndị nwere ezi uche ga-eji.Ọrụ nlekọta a metụtara nhọrọ nke ndị mmadụ ga - arụ ọrụ na kọmịtịị.Udị ndị ahụ ekwesịghị iwetara ndị ọrụ kọmịtịị nkọcha.
Ndi anamachọ kwesiri igụ akwụkwuọ nke kọmịtịị wikimedia foundation ma nyocha iwụ na ọrụ nke nlekọta tụpụ itinyewe dika onye anamachọ
1 Orụbere Na Ọrụ Rụrụ Ndi Kọmịtịị Nke Nlekọta
2 Nke ruru eru
3 Ngwa Achọrọ
4 Nyefee ihe akaebe nke njirimara na Wikimedia Foundation
5 Etu ị ga-esi tinye anamachọ gị
Orụbere Na Ọrụ Rụrụ Ndi Kọmịtịị Nke Nlekọta
Ndi komịtịị nke nlekọta n'elebara anya na oru Wikimedia Foundation. Ezigbo ndị nlekọta na-eme ka njikwa dị mma site n'aka onye isi oche na udiuzọ ọzọ, ndị ọrụ ahụ. Ha anaghị elekọta nzukọ a ọ na-arụ kwa ụbọchị. Ndị nlekọta ọrụ Board gụnyere ime mkpebi, nyocha, na ochichi.
Ime mkpebi na-atụle atụmatụ na ebumnuche na amuma agwa;
Nyochaa arụmọrụ nke Wikimedia Foundation, ihe egwu, ego, na nnabata;
Nye ndụmọdụ onye isi oche na ndị okenye n'ọrụ na-eji ọkachamara na ahụmịhe dị mkpa; na
Ikwurita uka na ndi obodo Wikimedia banyere orụbere na ọrụ ndi kọmịtịị.
Ndị nlekọta na-ejide iwu na ụkpụrụ omume nke nzukọ. Ha na-anakọta ma zụlite ụdị dị iche iche na kọmịtịị. Ndị nlekọta ga-eme ihe kacha mma maka Wikimedia Foundation. Enwere ike ịhọrọ ndị nlekọta site na vootu obodo, mana ha bata na kọmịtịị, ha abụghị ndị nnọchi anya obodo.
Mụtakwuo maka ọrụ ndị kọmịtịị nke nlekọta na Akwụkwọ Ntuziaka nke kọmịtịị na Wikimedia Foundation.
Ndi anamachọ kwesiri imezụ oru ha n'oru kọmitii. Nke a na-agụnye ịjụ ajụjụ banyere nsogbu dị mkpa, ịme mkpebi nke ọma, na ịga nzukọ ọgbakọ. Ihe ntozu a choro maka ndi anamachọ bu otu ihe maka ndi na atuli aka ya na ihe ndi ozo a:
A gaghị ekpe gị ikpe na mpụ dị oke njọ ma ọ bụ mpụ ọ bụla metụtara akwụwaghị aka ọtọ ma ọ bụ aghụghọ;
A gaghị ewepụ ọnọdụ gị na ụlọ ọrụ na-enweghị uru ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'ihi nrụrụ aka ma ọ bụ omume rụrụ arụ;
N'oge nhọpụta ma ọ bụ ntuli aka, A gaghị enwe ike machibido ma ọ bụ gbochie gị na ọrụ ọ bụla Wikimedia maka ụbọchị iri atọ ma ọ bụ karịa;
Ọ bụrụ n ’ị ga-ezute ihe tozuru etozu ịtụ vootu dịka onye ndezi: Ihe izizi gị gharịrị igafe 9 Jụụn afọ 2019;
Ikwesiri igosiputa ezigbo aha gi na ngwa anamachọ.
Ọ gaghị ekwe omume ijide ọkwa na kọmịtịị nke nlekọta n'okpuru aha ugha n'ihi na njirimara ndị kọmịtịị nke nlekọtabụ ndekọ ọha.
I kwesiri idi ọdikaria ala afọ iri na asatọ na afọ iwụ n'obodo;
Ikwesiri inyefe ndi wikimedia foundation akaebe njirimara na afọ gi;
Na ọbụrụ n'iso na ndi kọmịtịị nlekọta ahọpụtara ahọputa i kwesiri i kwụsi ọru kọmịtịị,ọchichi ma ọ bụ ọkwa ana akwụ ụkwọ na wikimedia foundation,isi,isiokwụ nzụkọ na otụ ndi ọrụ.
I Nweghị ike ijikọ ngwa ma ọ bụ nkwupụta gị na ndepụta nke nkwenye ma ọ bụ peeji ikpo okwu ndị ọzọ, I Nweghị Ike iso otụ ndianamachọ ọzọ.
Kwesiri ịnye ihe akaebe nke njirimara gị na Wikimedia Foundation tupu 23: 59 29 June 2021 (UTC). Onye otu Kọmitii Ntuli aka ga-akpọtụrụ gị maka nke a mgbe itinyechara akwụkwọ.
Ndi anamachọ nke n'ewetezụhi ihe ndi achọrọ tụpụ oge enyere aga ewepụ ya.
Nyefee ihe akaebe nke njirimara na Wikimedia Foundation
Ndị anamachọ maka ọnọdụ a ga-enyefe ihe ngosi nke njirimara na ihe akaebe nke afọ nke ọtụtụ dị ka ọnọdụ i bụ onye anamachọ. Otu n'ime akwụkwọ ndị a ga-emezụ nke a:
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala
Akwụkwọ ikike ndị ọzọ na-egosi ezigbo aha na afọ
Enwere ike ịnye ihe a na Wikimedia Foundation site na email na secure-info
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị anamachọ ahọpụtara ahọpụta, ndi Wikimedia Foundation nwere ike ịchọ ozi njirimara ndị ọzọ ka ị wee nwee ike ịdebanye nyocha tupu ịhọpụta gị na kọmịtịị.
Etu ị ga-esi tinye anamachọ gị
Ọ bụrụ n'irụrụ erụ, i nyere ike itinye maka i bụ onye anamachọ.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_elections/2021/Candidate_Requirements/ig&oldid=21606879"